Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba eGrisi » Iindawo zokutyela, imivalo kunye neefestile ziyavulwa kwakhona eGrisi emva kwenyanga ezi-6 zokuvala i-COVID-19
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko • Iindaba zokuhamba zaseYurophu • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zokuhamba eGrisi • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Uhambo lweNdawo eNtofontofo • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zewayini
Iindawo zokutyela, imivalo kunye neefestile ziyavulwa kwakhona eGrisi emva kwenyanga ezi-6 zokuvala i-COVID-19
Ukutshixwa kwe-COVID-19 yesibini eGrisi, eqale nge-7 ka-Novemba ngo-2020, ngokuthe ngcembe iyayekelela kule ntwasahlobo
Indawo yokutya neyokutya yamaGrike iqale phantsi kwemiqobo ngaphambi kokuvulwa kwexesha lokhenketho
Iindawo zokutya neziselo zivunyelwe kuphela ukuhambisa abahlali behleli ngaphandle
Abathengi kufuneka babhukishe idinga kwaye bathumele umyalezo obhaliweyo kwinombolo yelizwe
Emva kweenyanga ezi-6 zokuvalwa okubangelwa yi-coronavirus, iivenkile zokutyela, iikofu kunye nemivalo ekugqibeleni zivuliwe Grisi kule veki.
Ukutshixwa kwesibini kwe-COVID-19 eGrisi, eqale nge-7 ka-Novemba ngo-2020, ngokuthe ngcembe iyakhululeka kule ntwasahlobo, njengoko inani lamatyala amatsha e-coronavirus azinzile mva nje kwaye ukugonywa kwabantu kuyaqhubeka.
Indawo yokutya neyokutya yamaGrike iqale phantsi kwemiqobo ngaphambi kokuvulwa kwexesha lokhenketho, elimiselwe uMeyi 15.
Iindawo zokutya neziselo zivunyelwe kuphela ukuhambisa abahlali behleli ngaphandle, benabantu abathandathu kwitafile nganye kunye nokuhamba okukhuselekileyo phakathi kweetafile. Abalindi banyanzelekile ukuba banxibe iimaski zobuso ezikhuselekileyo kwaye bathathe iimvavanyo ezimbini ze-COVID-19 ngeveki.
Abathengi kufuneka babhukishe idinga kwaye bathumele umyalezo obhaliweyo kwinombolo yelizwe ukuthethelela ukuphuma kwabo. Zonke iindawo zokutya neziselo mazivalwe ngo-11.00 ebusuku ngexesha lokubuya ebusuku.
Kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo, iivenkile zokutyela kunye neefestile zaseGrisi bezinokunikezela kuphela ngeenkonzo zokuhambisa kunye nokuthatha. Uninzi lukhethe ukuhlala luvaliwe.
Kunyaka ophelileyo, icandelo lokutyela lilahlekelwe ngaphezulu kwe-2.5 yezigidi zeerandi ($ 3 yezigidigidi) ngengeniso, ngokutsho koqikelelo lwamva nje lwe-Hellenic Statistical Authority (ELSTAT).
Iphakheji yombuso waseGrisi wamanyathelo enkxaso aya kuthi ga kwi-15 yezigidigidi zeerandi kulo nyaka, iphindwe kabini ingqikelelo yokuqala ye-7.5 yezigidigidi. Ixabiso eliqokelelweyo leepakeji zenkxaso ukusukela oko kwaqala ubhubhane ime kwi-39 yezigidigidi zeerandi, utshilo umphathiswa wezemali uChristos Staikouras kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Amanyathelo abandakanya inkxaso mali mboleko zebhanki, ukunqunyanyiswa kwerhafu kunye neentlawulo zeinshurensi yezentlalo kunye noncedo lwezezimali kwiimali ze-EU (EU) zokuhlawula iirenti nezinye iindleko.
Njengokuba ilizwe lisokola ukulawula ubhubhane, ugonyo luyaqhubeka kwinani elonyukayo lamazwe anezitofu zokugonya ze-coronavirus esele zigunyazisiwe. Malunga ne-3.1 yezigidi zeedosi zokugonya ezenziweyo eGrisi ukuza kuthi ga ngoku.